देश - Sagarmatha TV
नेपालको पुरानो आदिवासी समुदायमध्येको एक मानिने मगर समुदायले ‘सम्पूर्ण मगर एक हौं’ भन्ने उद्घोषका साथ यो दिवस मनाएका हुन् ।
काठमाडाैं । नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बामदेव गाैतमलाइ राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णयमा कुनै हालतमा परिवर्तन नहुने बताएका छन् । संसद भवन नयाँ वानेश्नवरमा प्रतिक्रिया दिदै उनले बुधबारको सचिवालय बैठकमा राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा एक मतले गाैतमलाइ पठाउने निर्यण गरेको भन्दै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘बुधबारको सचिवालय बैठकमा सबै […]
नेकपाभित्र विवाद चुलिएका बेला ओलीले भेटे कांग्रेस नेता कोइराला
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाभित्र तिव्र ध्रुविकरण बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन् । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता कोइरालाबिच झण्डै डेढघण्टा लामो भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेता कोइरालाले ओलीलाइ नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन सुझाव दिएको जनाइएको छ । भेटमा राष्ट्रिय […]
यति समूहका सदस्य शेर्पा लागुऔषधसहित पक्राउ
काठमाडौं- यति समूहका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाका छोरा नवाङ पासाङ शेर्पा लागूऔषधसहित पक्राउ परेको रहस्य खुलेको छ । लागुऔषधसहित पक्राउ परेका चार जनामध्ये तीन जनाको बुधबार जिल्ला अदालतमा बयान लिइएकपछि शेर्पा पक्राउ परेको रहस्य सार्वजनिक भएको हो । उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी गोप्य राखेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासमा भएको थियो। […]
लिम्पियाधुरा, लिपुलेकल समेटेएर नेपालको नयाँ नक्सा तयार
काठमाडौं- सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतद्वारा मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिएको जानकारी दिइन् । नेपालको हालको नक्सामा भारतद्वारा मिचिएका ती भूमिलाई समावेश नगरिएकाले नागरिक स्तरबाट सकारको कडा आलोचना हुँदै आएपछि सरकारले […]
युवराज खतिवडा बने सरकारका प्रवक्ता
काठमाडौं । सरकारको प्रवक्तामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको राजीनामा पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्हालेका छन्। सञ्चारमन्त्रीलाई सरकारका प्रवक्ता तोक्ने प्रचलन छ। मन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत हुन् […]
रुकुम । रुकुम र जाजरकोट सिमामा पर्ने भेरी नदीको प्रचार प्रसार तथा पर्यटन पर्वद्धनका र्‍याफटिङ गरिएको छ ।
नेपाल भम्रण वर्ष २०२० र घुमौं कर्णालीलाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भेरी नदीमा र्‍याफटिङ गरेको हो ।
काठमाडौं । संविधान जारी भएको चार बर्षमा नै नेपालमा संविधान संशोधनको माग सत्तारुढ दलबाट नै हुन थालेको छ ।
अहिले संसदीय शासन पद्धतिले देशलाईं अग्रगति दिन नसक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने माग सहित संविधान संशोधनको कुरा उठेपछि यो विषय कसरी टुंगो लाग्ला ?
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिले राजनीतिक मुद्दाका विषयलाई लिएर कुनै पनि किसिमको शैक्षिक हड्ताल नगर्न अपिल गरेको छ । समितिका संयोजक सुनीलकुमार पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र ठानी आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको बन्द हड्ताल नगर्न अपिल गरिएको छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाले शिक्षा […]
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । अब […]